Maamulka Degmada Buuloburde Oo Faah Faahiyay Dil Ka Dhacay Degmadaasi – Goobjoog News
Maamulka degmada Buuloburde ee gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay dil la sheegay in Xarakada Al-shabaab ay u geysteen nin dhallinyaro ah oo muddo Shan Bil kahor ah ka qafaasheen degmadaasi.
Gudoomiyaha degmadaasi Cabdicasiis Duurow oo la hadlay Goobjoog News ayaa ugu horeen beeniyay in shaqsigaasi la dilay uu ka tirsanaa dowladda Federaalka, wuxuuna tilmaamay in ninkaasi ay ogaayeen inuu ahaa nin shacab ah.
Waxa uu tilmaamay in ka maamul ahaan ay aad uga xunyihiin muwaadinkaasi Soomaaliyeed ee la dilay, balse waxa uu tilmaamay in dilka ninkaasi ay ka dambeeyeen Al-shabaab oo muddo Shan Bil kahor ah qafaalatay.
“Ninkaan waxa uu ahaa wiil dhallinyaro Soomaaliyeed ah waan ka xunnahay mana ogi meel uu uga mid ahaa dowladda, laakiinse nimankaan nabad diidka ah cid ay dhaafayaan malahan” ayuu yiri gudoomiyaha Buuloburde.
Dhinaca kale gudoomiye Duurow ayaa ugu baaqay shacabka ku dhaqan degmada Buuloburde inay kaalin ka qaataan sugidda amniga degmadaasi iyo sidoo kale dagaallada ka dhanka ah Xarakada Al-shabaab.
Wasiirada Amniga Iyo Gaashaanidhigga Oo Su’aalo Lagu Waydiiyay Xarunta Baarlamaanka & Mooshinkii Xasaanadda Oo La Gudagalay